झुकिएर पनि भगवानको यस्तो प्रतिमा घरमा राख्नु हुँदैन, कंगाल भइन्छ ! – Ujyaalo Post
झुकिएर पनि भगवानको यस्तो प्रतिमा घरमा राख्नु हुँदैन, कंगाल भइन्छ !
एजेन्सी, २२ साउन । भगवानको दर्शन गर्न साथै प्रार्थना गर्नको लागि मन्दिर जाने गरिन्छ भने आफ्नै घरमा पनि मन्दिरको स्थापना गरेर पूजा गर्ने गरिन्छ। घरमा मन्दिरमा कस्तो प्रतिमा राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैनै दुविधा हुने गर्छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार केहि मूर्तिहरु यस्तो पनि हुन्छन् कि घरमा स्थापना गर्ने बितिकै पनि घरमा शुभ सङ्केतहरु देखा पर्ने गर्छन्।
तर यस्तै केहि भगवानको मूर्तिको गलत स्थानमा स्थापना गर्दा भने नोक्सान पनि पुग्न जाने हुन्छ। आज हामी यस लेखमा केहि भगवानको मुर्तीहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं, जसको दर्शन गर्दा मात्रै पनि गलत असर पर्ने गर्छ। भन्ने गरिन्छ कि एकै पूजा घरमा एकै भगवानको दुई मूर्ति कहिले पनि राख्न हुँदैन। यसो गर्नाले घर-परिवारमा झगडा बढेर जाने गर्छ।
भगवानको मूर्ति स्थापना गर्दा भगवानलाई आफ्नो पिठीउ देखिने गरि स्थापना गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि प्रकारको मूर्ति फुटेमा अथवा खण्डित भएको अवस्थामा मूर्तिलाई जलमा बगाइदिने पर्ने हुन्छ। यदि फुटेको मूर्ति पूजा घरमानै राखेमा भने परिवारमा नकरात्मक ऊर्जाको असर पर्ने मान्यता रहेको छ। घरमा राखिने मूर्ति अथवा भगवानको प्रतिमामा भगवान क्रोधित भएको हुनुहुँदैन।
घरमा राखिने भगवानको प्रतिमामा भगवान जहिले पनि प्रसन्न भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यति मात्र नभई पूजा घरमा भगवान युद्धको लागि तायरा भएको प्रतिमा राख्न नहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।